Paolo Raholinarivo “Mila ampitomboina ny tetibolam-panjakana”
Fotoana handinihana ny tetibolam-panjakana nasiam-panitsiana (LFR) ho amin` ny taona 2020 eny amin` ny Antenimiera roa tonta izao.
Amin` izao fiatrehana ny aretian “coronavirus” izao dia mila ampitomboinna ny tetibolam-panjakana raha ny nambaran`i Paolo Raholinarivo, administratera sivily. Mila ampiana ihany koa ny fanampiana ho an` ireo olona tena sahirana. Tsy manakana, hoy izy, ny lalàmpanorenana na ireo didy aman-dalàna raha atao roa ny tetibola. Kely dia kely ny eo am-prelanatana raha ny tetibolam-panjakana lasitra (LFI) no jerena. Rariny, hoy hatrany izy, raha hampitomboina izany satria tsy voatosika ny fanjakana ny covid-19. Maro rahateo ireo sehatra sy olona marefo izay tsy mbola nahazo tolo-tanana, hoy hatrany ny fanazavana.